Kaamelott – The First Chapter(2021) – Gold Channel Movies
Video Sources 3175 Views Report Error
Kaamelott – The First Chapter(2021)
Patience is better served with sauceJul. 21, 2021France120 Min.Not Rated
Kaamelott First Installment (2021)
လန်စလော့ဒ်ဟာ လာဂရက်စ်နိုင်ငံတော်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ လန်စလော့ဒ်ဟာ သူ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ အာသာပန်ဒရာဂန်ကို ဖမ်းဆီးဖို့ ဆက်ဆန်ကြေးစားစစ်သည်တွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အာသာပန်ဒရာဂန်ဟာ ဒေမီရန်ဆက်ဆနီရန်ဆီမှာ ၉နှစ်ကြာအောင် ကျွန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရောင်းစားခံလိုက်ရပါတယ်။ ၉နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့မှောင်ခိုပွဲစားက ဒေမီရန်ဆီကနေ အာသာပန်ဒရာဂန်ကို ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီးတော့ ဗြိတိန်ကိုပို့ပေးဖို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်ကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးတစ်နေရာ အကွစ်တင်းနယ်စပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အာသာပန်ဒရာဂန်အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အကွစ်တင်းမြို့စားဟာ မှောင်ခိုပွဲစားဆီကနေပြီးတော့ အာသာပန်ဒရာဂန်ကို ရွှေဒင်္ဂါးနှစ်ထောင်ပေးပြီး ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ မြို့စားကတော်ကတော့ အာသာပန်ဒရာကို သူ့ယောက်ျားကြားဖြတ်ဝယ်ယူလိုက်တာကြောင့် လန်စလော့ဒ်အန္တရာယ်ပြုမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေပါတယ်။ လန်စလော့ဒ်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ကာမယ်လက်ဒ်ရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးလို့ ခံယူထားပါတယ်။ ကျောက်တုံးထဲကဓားကိုထုတ်ယူနိုင်တဲ့သူကသာ ကာမယ်လက်ဒ်နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်ရှိထားပါတယ်။ ကျောက်တုံးထဲကဓားကို ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့သူက လန်စလော့ဒ်ဖြစ်မလား? အာသာပန်ဒရာဂန်ဖြစ်မလား? အာသာပန်ဒရာဂန် သူ့ရဲ့ဘုရင်နေရာကိုပြန်ရဖို့ ဘယ်လိုစွန့်စားမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမလဲ
Translated by May Mi Kyaw, Sunny, Monn
Original title Kaamelott: Premier volet
IMDb Rating71,874 votes